विपत्तिमा युकेवासी नेपालीको एकता
गणेश राई -
‘देश पनि हेर्ने मुख पनि फेर्ने भनेर युके आको धेरै भयो नानी,’ लमजुङकी ८० वर्षीया कमली गुरुङ लौरो टेकेर मेला हेर्न सहभागी हजुरआमाले भनिन्, ‘हाम्रो नेपालमा भेलबाढी आयो रे । धेरैजनाका बिचल्ली भएको छ रे । उनीहरुलाई थोरै भएपनि यहीं बसेर सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ यसरी मातृभूमिलाई माया गर्नेहरू आफूले कहर काटेर भएपनि जुटिरहेका छन् । यी वृद्धा परिवारका सदस्यका साथ लागेर फार्नबोरोबाट आएकी हुन् । बेलायतको केम्पटन पार्क रेस कोर्समा आयोजित नेपाली मेलामा हजारौं सहभागीमध्ये एक प्रतिनिधि अभिव्यक्ति हो यो ।
तमुधिं यूकेले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा नेपाली मेलाको नवौं संस्करणमा यो सुनौलो अवसर मिलेको छ । ‘हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गौरव’ नारा लिएर बेलायतमा रहेको नेपाली जनजनका मन–मनलाई जोड्ने काम हुँदैआएको छ । यो वर्ष २७ अगष्ट, २०१७ मा मेलाको साइत जु¥यो । आयोजक तमुधिं यूके हो । यद्यपि सहभागिता सबैखाले नेपाली जातिको सहभागिता हुनु आफैंमा तारिफ योग्य र अद्वितीय कार्य हो । सबै नेपाली जातजाति, धार्मिक समुदायको साझा मेला सावित भएको छ । चाहे, बौद्ध गुरुहरुको धार्मिक प्रवचन होस् या क्रिश्चियन पादरीहरुको मण्डली, हिन्दु पण्डितहरुको प्रस्तुति त्यसको उदाहरण हो । सुदूरपश्चिमको मस्टो पूजा गर्ने खस क्षेत्रीहरुमा हुड्केली नाच उस्तै रौनकमय रह्यो । बेलायतवासी करिब दश हजार नेपाली अकल्पिनीय जमघटमाझ तमुधिं यूकेले नेपालका बाढी पीडितलाई १० लाख सहयोग उठाएर एनआरएन आईसीसी अध्यक्ष डा. शेष घलेलाई हस्तान्तरण गरेको छ । तमुधिं यूकेका अध्यक्ष ज्ञाम गुरुङ, प्रमुख अतिथि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले रकम हस्तान्तरण गरेका छन् ।
तमुधिं यूकेको आह्वानलाई ८० वर्षीया कमली गुरुङलगायत नेपालीले शिरोपर गरेका छन् । वाह् वाह् वाह् ! नेपाली मनहरू यसरी जोडिन्छन्, नेपालीको साझा पीडामा । आफ्ना संरक्षक एवं एनआरएनए आइसीसी अध्यक्ष शेष घलेमार्फत उक्त रकम बाढी पीडितलाई दिएको हो । ‘नेपालमा आपतकालिन कोष नबनकाले विपत्ति आएपछि मात्र देशविदेशबाट सहयोग जुटाउँने गर्दा पीडितहरु चाहिने बेलामा सहयोग पाएका छैनन् ।’ अध्यक्ष घलेको विचार मननीय छ । यो पक्षमा नेपाल सरकारले सोच्नै पर्ने देखिन्छ । उनले गृह मन्त्रालयको सुझाव र समन्वयमा बाढीले सबैभन्दा प्रभावित र विपन्न जिल्ला सप्तरीमा गएर चार हजार पांचसय परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छन् । त्यही अनुभवका आधारमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् । सर्वविदितै छ कि चार वर्षको अवधिमा भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीपहिरोले नेपाल छियाछिया भएको छ । यद्यपि नेपाली मनलाई जोड्ने काम बेलायतवासी नेपाली जुट्दै आएका छन् ।
मेलामा नेपालको तमुको संस्कृति साँच्चै जिउँदोजाग्दो प्रस्तुति अविष्मरणी बनेको छ । मगर संस्कृतिको झाँकी गर्विलो बनेको छ । मेलामा युवाहरुको सहभागिता अनि नेपाली लोकगीतमा साना साना नानीहरुलाई नाच्न लगाउनु सामाजिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण कडी हो । विभिन्न संघसंस्थाहरुको झाँकीमा नेपाली जनजीवनमा प्रयोग भएका कृषिकर्मका सामग्रीहरु, मौलिक पहिरन गर्वसाथ पहिरिएर उत्रिनु आमाबाबु तथा परिवारको अभिभावकीय क्षमताका अब्बल रुप हो । सोचिएन कि बेलायतमा बस्ने भान्जाभान्जीहरु मौलिकताप्रति यत्तिका मनकारी हुन्छन् । देखेर, हेरेर, बोलेर, फोटो खिचेर राखेपछि साँच्चै नेपालीपन र नेपाली मन उनीहरुको साथमा छ भन्ने महसुस भएको छ । यद्यपि नेपालको पूर्वी भेगको जातीय संस्कृतिको भने अभाव देखियो ।
नेपाली मेलाका संयोजक तथा तमुधिं यूके उपाध्यक्ष हितकाजी गुरुङको अगुवाई प्रशंसनीय छ । हजारौं माइल टाढा छ नेपाल तर त्यो नेपालको नेपाली भाषा, साहित्य, परम्परागत कला संस्कृतिलाई बेलायतका एकै थलोमा प्रदर्शन गर्नु चानचुने कुरो होइन ।
उनै हजुरआमा कमली गुरुङसित भएको कुराकानीबाट बिट मारौं । ‘बाबु तिमीले मलाई किन यो कुराहरु सोधिराको हो ?’ ठूलो रंगशालाको स्टेजमा बसेर ट्होटे पर्व झाँकी हेर्दै आनन्द लिइरहेकी हजुरआमालाई भनें, ‘हजुरआमा म तपाईको अनुभवलाई अरुलाई सुनाउने मान्छे हो । हामीलाई पत्रकार भन्छन् । नेपालबाट आएको हो ।’ फेरि भनिन्– ‘हाम्रो कुरा लेखेर के पाउँछ बाबु ?’ अनि भनें– ‘नेपालमा दुःख परेका मान्छेहरुले तपाईहरुबाट सहयोग पाउँछन् ।’ कुरो अलिक मिलेको थिएन । तैपनि त्यतिमै बिट मारियो । मैदानमा खाना र च्यारिटीका स्टल भीडभाड बढिरहेकै थियो ।
(राई पाहुना लेखक हुन्)